Class laminate: umehluko. Yikuphi ukukhetha isigaba laminate
flooring laminate ingenye Uthwale phansi ethandwa kakhulu. Abantu abaningi ukunquma okuyibeka ekhaya lakhe, inkampani eyayivame ukunikeza Amahhovisi. Nokho, bonke abathengi nazo isici ezifana ekilasini laminate. Umehluko-non-ochwepheshe cishe ezingabonakali, kunzima ukukhetha umkhiqizo ofanele ezimweni ezithile.
Igama elithi "laminate" kubolekwe ezisusela olimini lwesiLatin kusho "egqinsiwe." Amabhodi le nto zivumelana ngokuphelele le ncazelo. Zakhiwa izingqimba eziningana fiberboard, futhi phezulu embozwe zokuzivikela ifilimu zokuhlobisa ukuthi kulingisa imidwebo ehlukahlukene.
Ngokuvamile lamellae aqukethe izingqimba ezine noma ezinhlanu, ngasinye sazo ezenziwe ngezinto ezahlukene. On Ukwakheka yabo, indlela ngokujoyina futhi izinto ukusetshenziselwa lokhu izici enamathela ukusebenza zincike: ukugqoka ukumelana, amandla, njll ugqinsi ngalunye izici nemisebenzi ...
Substrate. Kuvamise umzila okunye, kodwa ngezinye izikhathi eziboshiwe ngqo ibhodi, ukuthuthukisa umsindo ukwahlukanisa izakhiwo.
Isendlalelo aphansi eyenza umsebenzi eliletha ukuthula. Siyabonga naye, laminate kugcina ezakheke kahle ezihlukahlukene izimo futhi hhayi zikhubazekile by umthwalo. Isendlalelo ephansi ubizwa ngezindlela ezihlukahlukene .. Kucinisa sokulinganisa noma uhlawula, okusho ukuthi encike kuyo rigidity, umswakama ukumelana kanye nezinye izakhiwo amandla ebhodini, njengoba eqala bokungafani enamathela. Yenziwe a kraft paperboard ekhethekile. Ukuze uthuthukise properties ukusebenza, ke iphathwa nge zokwenziwa inhlaka.
Kumila siqukethe fiberboard Isidlulisilwazi. Isendlalelo yenethiwekhi eqala ingxenye eyinhloko umthwalo: ende static, ashukumisayo, kubika iKickOff.com ngoLwesithathu. Lokhu ichaza laminate ekilasini. Umehluko zinqunywa kanye namandla we engxenyeni engaphandle. Futhi zincike ukushisa kanye ukwahlukanisa umsindo izakhiwo ke. Futhi inikeza amandla futhi umswakama ukumelana ebhodini. Kuyinto ungqimba obukhulu, kuba sivala ngomshini, okuyothi slats axhunyiwe.
Isendlalelo thinnest - lokhu zokuhlobisa. Siqukethe paper, eyayikhipha lisetshenzisiwe iphethini oyifunayo. Kunyatheliswa ungakwazi belingisa ukuthungwa ngokhuni, ngamatshe noma ukuthungwa ehlukene. Ukuze isikhathi ekuphileni ungqimba zokuhlobisa ke ziphathwe impregnations ekhethekile.
Kusukela ungqimba engenhla, izikhwepha zayo kanye ukushuba engaphansi nemihuzuko ukumelana. Siqukethe acrylic noma melamine inhlaka. Ukunikeza zifana enkulu ukuba ukuthungwa imaged phezu ungqimba abaphambili engalingani. Ngenxa yalokhu laminate 33 ekilasini azizwa kakhulu efana isihlahla.
Kunezindlela ezimbili yokukhiqiza isembozo phansi yilezi:
Laminate kokucindezelwa oqondile wenziwa usebenzisa ubuchwepheshe DPL. Kulokhu, izingqimba ibhodi kuthiwa sicindezelwe ndawonye, ngesikhathi esifanayo. Ngenxa kokucindezelwa kwenzeka futhi ekhuthaza yalo. Ngalokhu phansi ubuchwepheshe esehlanganise ukusetshenziswa zokuhlala kanye amamaki commercial aphansi (akazidluli 32) kukhiqizwa.
Laminate ezivezwa HPL, ine kwagcizelela ungqimba phezulu: Kraft paperboard yengezwe iphepha zokuhlobisa (iyafana ngesisekelo). QHUBEKELANI slats ezingxenyeni. Endaweni ehlukile, amapuleti main futhi aphansi futhi ngokwehlukana - phezulu. Base axhunyiwe indiza efanayo. ekhiqizwa Ngakho amandla okusezingeni eliphezulu ezibonakalayo, ezingashabalala iphathelene isigaba 33 no-34, it libhekene amandla nokuqina kwayo anda.
Uyini classiness, futhi uwuchaza kanjani?
Ukuze sithole izici nokusebenza kwe-laminate yabekwa nokuvivinywa okuhlukahlukene. Sekukonke kukhona 18 ukuhlolwa. Kusukela imiphumela prototypes kuboniswe babelwe ekilasini laminate. Umehluko amanga nje ukuthi baziphathe kanjani ebhodini umthwalo obuhlukahlukene.
Manje ukwaba 2 iqembu elikhulu ezinengilazi: ukusetshenziswa zokuhlala kanye commercial (ezindaweni ezihlukahlukene umphakathi: emahhovisi, ezitolo, njll). Idijithi yokuqala ebonisa isigaba kwezicelo. 2 - Ezezindlu 3 - commerce. Nokho, Okwamanje, i-material umthengi ezikhethekile esuswa ukukhiqizwa, isb. Ukuze. It Uxosha 31 no-32 ekilasini.
AU mshini lungatholwa kwi isembozo. Lokhu notation lisezingeni elinjani bafake ukumelana elingenhla ungqimba zokuzivikela. It kuhluka 3 ukuya ku-6 ephakeme inomboro, livikela kakhulu nokuhuzuka enamathela. isikhathi eside kakhulu futhi ukugqoka ukumelana laminate flooring - 34 ekilasini. Isendlalelo zokuzivikela buyaqina, imakwe AC6, Nokho ingasetshenziswa imithwalo esiphezulu.
Laminate 31 ekilasini (AC3)
Ekuqaleni senzelwe izakhiwo bezentengiselwano ne umthwalo ongaphakeme, isibonelo, reception, endlini yomhlangano, lwenzelwe iminyaka 2-5. Nokho, ngenxa ngemali ephansi futhi izinga okusezingeni eliphezulu lisetshenziswa njalo ekuphileni kwansuku zonke. Ekhaya ingahlala iminyaka 6-10. Nokho, it is hhayi Kunconywa ukuba sisisebenzise imihubhe, emaphasishi esikoleni noma emakhishini. Umkhawulo ukuphila isikhathi eside esinamakamelo, pantries, njll D.
Laminate 32 ekilasini (AC4)
Olunye uhlobo flooring engasetshenziswa ezindaweni zomphakathi, futhi ekuphileni kwansuku zonke. Esimweni sokuqala kuba igumbi Amahhovisi unqamule izwe elincane a. Lapha-ke ngeke izothatha iminyaka engu-5. Uma usebenzisa ekhaya, kungashiwo sibekwa iliphi igumbi. Nokho, kubiza ezibizayo kakhulu ngaphezulu. Ngakolunye uhlangothi, i-laminate "Isihlahla se-oki" (isigaba 32) ilingisa kahle parquet flooring, futhi kubiza kufinyeleleke kakhulu. ukuphila inkonzo ongafinyelela iminyaka 15-17.
Laminate 33 amakilasi (AC5)
amandla Material ephakeme, eyenzelwe imithwalo eliphezulu kakhulu. Indlu encane esetshenziswa, abakhiqizi onganikeza isiqinisekiso iminyaka 20-25 ukusetshenziswa. By the way, 33 - isigaba laminate waterproof ukuthi ilungele ekhishini.
Isikhathi esining impela yakhetha lapho ifakwe ezihlukahlukene izindawo esiphithiphithini: izitolo, izindawo zokudla. Nge umthwalo ongako liyokuma iminyaka 5-6, ngokuncane okukhulu - isikhathi eside ngokuphindwe kabili.
Nge ukwelashwa ngokuphelele ungqimba phezulu kanye nokuqiniswa luthi alufane zokuzivikela igcina ukubukeka ekhangayo lonke umjikelezo wokuphila.
Laminate 34 ekilasini (AC6)
I isikhathi eside kakhulu futhi amelana ezihlukahlukene ekucindezelekeni impahla. Isetshenziselwa umhlobiso ezemidlalo amahholo, eziteshini zezitimela, zomdanso nokunye. D. Ngisho nasesimweni esingesihle ezinjalo izothatha iminyaka okungenani 10. Floor esehlanganise ezingeni ezinjalo ekhiqizwa abakhiqizi ambalwa European. Ukuze ukusetshenziswa ekhaya ngokuvamile unikezwe yesiqinisekiso esaphila.
Kufanele kubhekwe ikakhulukazi lapho ekhetha ekilasini laminate. Umehluko izici abasakwazi eningi.
Akukona njalo isidingo ukuthenga izinto eziningi bafake nemithi. Kudingeka ungacabangi ngokuningiliziwe indlela laminate izosetshenziswa. 33 ekilasini - namanzi, Kungcono kakhulu ekhishini, kodwa lokulala ungathenga okuthile okulula, ngakho-ke akwenzi mqondo overpay izici engadingekile ukuthi ngeke ewusizo ukusetshenziswa ekhaya ... Ukuze ngokulinganisela umthwalo ekilasini ngokwanele 31, ngoba imihubhe kanye namaphaseji - 32. A Thenga ngoba luthi alufane indlu esetshenziswa zezindiza, akukho iphuzu uma kuphela egumbini akuyona ifakwe ezemidlalo noma umdanso ihholo.
Njengoba kuboniswe, laminate - kuba isixazululo kakhulu, esebenzisekayo futhi okungabizi kakhulu umhlobiso efulethini.
Concretes yeselula: izinhlobo, umlando ukuvela ububanzi bokusebenzisa
Miselela cam ngoba labathaki bamafutha
Okugeza Ukwakhiwa amabhlogo silicate
Brondirovanie izinwele izinwele ensundu. Brondirovanie izinwele konsundu
Baikov emathuneni: ikheli. Izidumbu e-Baikove emathuneni eKiev. Amathuna osaziwayo ku Baikove emathuneni (isithombe)
Uzwane alimazayo. ukwelashwa